WINDOWS PASWỌỌDỤ NKE WINDOWS 8 - WINDOWS - 2019
Windows paswọọdụ nke Windows 8
Ichedo akaụntụ njirimara na paswọọdụ bụ njirimara mara site na nsụgharị nke Windows. N'ọtụtụ ngwaọrụ dị ugbu a, dịka smartphones na mbadamba, enwere ụzọ ndị ọzọ iji gosipụta onye ọrụ - nchedo site na iji PIN, ụkpụrụ, imata ihu. Windows 8 nwekwara ike iji okwuntughe amaokwu ịbanye. N'isiokwu a, anyị ga-atụle ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Hụkwa: otu esi emeghe usoro eserese android
Site na iji paswọọdụ eserese na Windows 8, ị nwere ike ịdọrọ ụdị, pịa ụfọdụ isi ihe oyiyi ahụ ma ọ bụ jiri mmegharị ụfọdụ maka onyinyo ahọrọ. O doro anya na ohere dị otú ahụ na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ, ka o doro anya na iji Windows 8 na ntanaka aka. Otú ọ dị, ọ nweghị ihe ọ bụla ga - egbochi iji ojiji paswọọdụ arụ ọrụ na kọmputa mgbe ọ na-eji mgbaji akwa.
Ihe mara mma nke okwuntughe amaokwu doro anya: nke mbụ, ọ dị ntakịrị "mara mma" karịa ịpị paswọọdụ site na keyboard, ma maka ndị ọrụ siri ike ịchọta igodo ha chọrọ bụ ụzọ dị ngwa karị.
Kedu esi edozi paswọọdụ mara mma
Iji setịpụ paswọọdụ dị na Windows 8, mepee ogwe aka panel site na ịgagharị pointer na mkpịsị aka nke ihuenyo ma họrọ "Ntọala", wee "Gbanwee ntọala PC" (Gbanwee Ntọala PC). Na menu, họrọ "Ọrụ".
Ịmepụta paswọọdụ mara mma
Pịa "Mepụta paswọọdụ foto" (Mepụta paswọọdụ foto) - usoro ahụ ga-agwa gị ịbanye paswọọdụ gị mgbe ị na-aga n'ihu. A na-eme nke a ka onye ọbịbịa wee ghara, mgbe ị na-anọghị, na-egbochi ịnweta kọmputa.
Okwuntughe amaokwu ga-abụ onye - nke ahụ bụ isi ihe ọ pụtara. Pịa "Họrọ foto" wee họrọ onyinyo ị ga-eji. Ọ bụ ihe dị mma iji ihe osise nwere nkọwa doro anya, akụkụ na ihe ndị ọzọ a ma ama.
Mgbe ịmechara nhọrọ gị, pịa "Jiri foto a" (Jiri foto a), n'ihi ya, a ga-akpali gị ịhazi mmegharị ahụ ịchọrọ iji.
Ị ga - eji atọ eme ihe na foto a (iji nru ma ọ bụ ihuenyo mmetụ, ọ bụrụ na ọ dị) - ahịrị, okirikiri, isi. Mgbe i mechara nke a maka oge mbụ, ị ga-achọ ikwenye na paswọọdụ dị iche iche site na imeghachi otu mmegharị ahụ. Ọ bụrụ na a mere nke a n'ụzọ ziri ezi, ị ga-ahụ ozi na-ekwu na e mepụtara ikikere paswọọdụ na bọtịnụ "Mechara."
Ugbu a, mgbe ị na-agbanye kọmputa ahụ ma chọọ ịbanye na Windows 8, a ga-ajụ gị kpọmkwem paswọọdụ mara.
Nkwenye na nsogbu
Na tiori, ojiji nke okwuntughe amaokwu kwesiri inwe oke nchedo - ọnụ ọgụgụ nke ijikọta isi ihe, esemokwu na ụdị dị na oyiyi ahụ bụ ihe na-enweghị njedebe. N'eziokwu, ọ bụghị.
Ihe mbụ ị ga-echeta bụ ịbanye na paswọọdụ nwere ike ịfe. Ịmepụta ma debe paswọọdụ site na iji mmegharị emegharị anaghị ewepu paswọọdụ ederede ọ bụla ebe ọ bụla na bọtịnụ "Jiri paswọọdụ" dị na Windows 8 nbanye ihuenyo - ịpị ya ga-eburu gị gaa n'ụdị nbanye akaụntụ.
Ya mere, paswọọdụ nwere ike abụghị nchekwa ọzọ, mana ọ bụ nhọrọ nbanye ọzọ.
E nwere ntụgharị ọzọ: na touchscreens nke mbadamba, laptọọpụ na kọmputa na Windows 8 (karịsịa mbadamba, n'ihi na ha na-ehi ụra) nkà, maa usoro nke iwebata mmegharị.
N'ịkọwa elu, anyị nwere ike ikwu na iji ikikere na-akwado ihe ziri ezi na ikpe ahụ mgbe ọ dị mfe maka gị. Mana ekwesiri icheta na nke a agaghi enye nchekwa.